Property Detail - Myanmarhousing
Map Detail View
nearby places within 5-km bank shopping_mall school park hospital pharmacy university library bar cafe restaurant
လုံးချင်းအိမ်၊ တိုက် (ရောင်းရန်)
ရန်ကုန်တိုင်း ၊ အင်းစိန်
ကျပ် ၅၈၀၀ သိန်း
၃၀၇၀ အလျား x အနံ[ဂရမ်မြေ : ဘိုးဘွားပိုင်]
I have found this Landed House_Sale_Mahar Thukhitar Street, Insein, Yangon, Yangon Region, Myanmar (Burma) advertisement on www.myanmarhousing.com.mm and would like to have more information. Thank you !
ဈေးနှုန်း Select Price
No 1 Ground Floor, Pin Shwe Nyanung Street, Tamwe Lay Township, Yangon
Contact No. 01551197
Myanmar Housing အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
1. Myanmar housing website တွင်ပထမဆုံး account open ပါ။
2. Account open ရာ တွင် user နှင့် Agent ဟူ၍ Type နှစ်ခုရှိသည်။
3. Account open ပြီးပါကမိမိ မှာ ရှိသောရောင်းရန် နှင့်ငှားရန် ရှိသောအိမ်ခြံမြေတိုက်ကွန်ဒိုများကို post တင်၍ှ user များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
4. Account open ရာ တွင်အခက်အခဲရှိပါက user guide တွင်ကြည့်ရှူနိင်ပါသည်။
5. Subscribe လုပ် ၍လည်း lastest post များကိုရယူနိုင်ပါသည်။
သင့်အချက်အလက်များကို အခြားသူကို ဝေငှ၊ဖြန့်ဖြူး လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင် မည်သည့်အချိန်မဆို unsubscribe လုပ်နိုင်သည်။